भङ्गेराको टाउको किन खाने ? - ramechhapkhabar.com
भङ्गेरा का’मुक चरा ! महान नाटककार से’क्स’पि’यरले भङ्गेरालाई यौ’ ‘न कार्यसँग जोडेका छन् । भङ्गेरा त्यस्तो प्राणी हो जसले दैनिक तीन सय पटकभन्दा बढी यौ’ ‘न स’म्प’र्क गर्छ । मान्छेको वस्तीसँगै रहने चञ्चले सानो चरा भङ्गेरामा आखिर त्यस्तो के शक्ति छ ?
वैज्ञानिकहरुले यसबारे अनुसन्धान नगरेका होइनन् । यौ’ ‘नउ’त्तेज’ना बढाउन भ’ङ्गेरा खाने चलन अझै छ । भङ्गेरा खाँदा यौ’ ‘न उ’त्ते’ज’ना बढ्ने सोच राख्नेहरु परापूर्व काल देखि नै थिए ।
जडिबुटिका ज्ञाता निकोलस कुलपिपरले भङ्गेराको गिदीले यौ’ ‘न बढाउने उल्लेख गरेका छन् । उनको तर्कलाई आधार मान्दा भङ्गेराको टाउको खानाले यौ’ ‘न बढाउँछ । विगत देखि नै यौ’ ‘न बढाउन भङ्गेराको टाउको खानेहरु थिए ।
अद्भूत यौ न शक्ति
भङ्गेरामा अद्भूत यौ’ ‘न शक्ति हुन्छ । पोथी भङ्गेराले प्रजननका समयमा भालेमाथि प्रभुत्व जमाउने गर्छे । सन् २००० मा जोडी एम. जओरले अक्सफोर्ड जर्नलमा प्रकाशित गरेको लेखमा पोथीले भालेमाथि प्रजजनका बखत जमाउने प्रभुत्वबारे उल्लेख छ ।
तापक्रम र मौसमले पनि भङ्गेराको यौ’ ‘न स’म्पर्कको संख्यामा फरक पर्दछ । सबैभन्दा बढी स’म्पर्क प्रजननको समयमा हुनेगर्छ । सरदर दैनिक तीन सय पटक भन्दा बढी यौ’ ‘न स’म्प’र्क भने गरेकै हुन्छ ।
भङ्गेरामा यौ’ ‘न स्व’च्छन्दता हुन्छ । एक अर्काको जोडीसँग दैनिक सयौं पटक यौ’ ‘न स’म्पर्क गर्छन् । पोथी भङ्गेराले एक वर्षमा दुई देखि तीनपटक सम्म अण्डा पारेर बच्चा कोरल्ने गर्छे ।
यो पनि : बिहान उठ्नासाथ गरिने यी कार्यले तपाइँकाे दिनकाे सुरूवात राम्राे हुनेछ
हरेक विहानीले दिउँसाेको संकेत गर्दछ । सुन्दर जीवनलाई सफल बनाउनु हाम्रो दायित्व हो । हाम्राे जीवनमा अनेक उतारचढाव आउँछन् । तर ती उतारचढावलाई व्यवस्थापन गर्दै सन्तुलित रूपमा दिनहरू बिताउने प्रयास गर्याैँ भने, जीवन सुन्दर बन्छ ।
-बिहान छिट्टै उठ्ने बानी बसाल्नुहाेस् । बिहान छिट्टै उठ्ने गर्नाले शरीरमा अल्छीपन आउँदैन । बिहान छिट्टै उठेर शारीरिक व्यायम गर्ने गर्नाले शरीर स्फूर्त रहन्छ । बिहान छिट्टै उठ्ने बानीले हामीले सबै कामहरू गर्ने समय मिल्छ र काम गर्न पनि जाँगर चल्दछ ।
-खाली पेटमा पानी पिउने गर्नुहाेस् । तपाइ बिहानै उठेर केही पनि नखाइ खाली पेटमा पानी पिउने गर्नुहाेस् । यसाे गर्नाले विभिन्र राेगहरूबाट छुटकरा पाउन सक्नुहुन्छ ।
-बिहानकाे लागी काम साचेर राख्नु भन्द अघिल्लाे दिन गर्न मिल्ने काम छ भने गरेर सुत्नुहाेस् । यसाे गर्नाले तपाइलाई बिहान उठेर अरू काम गर्न सजिलाे हुनेछ । कुनै पनि कामहरू साँचेर राख्नु भन्दा गरि हालेकाे नै राम्राे हुन्छ । त्यसैले जति सक्दाे गर्न मिल्ने कामहरू गरि हाल्नुपर्दछ । यसाे गर्नाले आफैँलाई सहज हुन्छ ।
-बिहान उठ्ने बित्तिकै माेबाइल हेर्ने बानी छ भने त्यसाे गर्न छाेडेर शारीरिक अभ्यास गर्नुहाेस् । यासाे गर्नाले तपाइकाे स्वास्थ्यमा फाइदा पुग्नकाे साथै तपाइकाे दिनकाे पनि राम्नाे सुरूवात हुन्छ । माेबाइल हेर्न थाल्नुभयाे भने त्यतै भुलिएर तपाइँले केही पनि गर्न भ्याउनु हुन्न र भरे सबै काम हतार हतार गर्नुपर्ने हुन्छ । हतारिएर गरेकाे काम राम्राे पनि हुँदैन र पछि आफैँलाई दिक्क लागेर आउँछ ।
-बिहानैकाे प्राकृतिक वातावरणलाई केहीछिन नियाल्नुहाेस् । यसाे गर्नाले मनमा आनन्द मिल्नेछ र बिहानीकाे सुरूवात पनि राम्राे हुन्छ ।
-सकारात्मक विचार ल्याउनुहाेस् । बिहान उठ्ने बित्तिकै सकारात्मक कुराहरू मात्र साेच्ने गर्नुहाेस् । यसाे गर्नाले दिनकाे राम्राे सुरूवात हुन्छ । नकारात्मक कुराहरू साेच्न थाल्नुभयाे भने दिमाखमा नराम्रा कुराहरू मात्र घुमिरहन्छन् । दिन नै खराब हुन्छ । आफुलाई के के कुरामा खुशी मिल्छ त्यही कुराहरू मात्र सम्झिनुहाेस् । जसकारण दिननै खुसीसाथ कटाेस् । तपाइका जिवनका रमाइला क्षणहरूलाई याद गर्नुहाेस् ।
-बिहान उठ्ने बित्तिकै समाचार पढ्नुहाेस्, प्रेसक भनाइहरू पढ्नुहाेस् । दिनकाे सुरूवात राम्राे हुन्छ ।
-घरकाे सरसफाइ गर्नुहाेस् । आफुपनि सफा भएर बस्नुहाेस् । घर सफा हुदा आफैँमा आनन्द हुन्छ । आफु पनि सफा हुँदा शरीर नै फ्रेस हुन्छ र जे काम गर्न पनि जाँगर चल्छ । जिउनै फुर्तिलाे हुन्छ । सरसफाइले मन तथा दिमाग पनि स्वच्छ र ताजा हुन्छ ।
-आफ्नाे परिवार, साथीसँग नजिक हुनुहाेस् । परिवार र साथीभाइहरूसँग माया र आत्मियता बाढ्नुहाेस् ।
-बिहान उठ्ने बित्तिकै दिनभरी आफुले गर्ने कामकाे तालिका बनाउनुहाेस् । साेही तालिका अनुसार आफ्नाे काम पुरा गर्नुहाेस् । यसाे गर्नाले तपाइकाे दिन राम्ररी कट्छ ।
-तपाइँलाई गर्न अल्छी लाग्ने या गाह्राे लाग्ने काम बिहानै गर्नुहाेस् । त्याे काम सकिदा तपाइँलाई खुसी लाग्नेछ र अरू काम गर्नकाे लागि जाेश बढ्छ । गर्न मन नलाग्ने काम त गरे अब यति पनि गरी हाल्छु भन्रे लाग्छ र अरू काम गर्न पनि जाँगर चल्छ ।
-केही समय अध्यात्मककाे लागी पनि छुट्याउनुहाेस् । अध्यात्मिक कार्यले तपाइकाे मनलाइ शान्ति दिन्छ । बिहानै भगवानकाे नाम जपी दिनकाे सुरूवात गर्नाले मनमा खुसी छाँउछ ।
-बिहान उठ्ने बित्तिकै सन्तुलित भाेजन गर्नुहाेस् । यसले शरीरमा फाइदा गर्दछ । बिहानै खाली पेटमा चिल्लाे खाना खानु भयाे भने शरीरमा गढबढी आउँछ । शरीरका लागी राम्राे गर्ने खाना खानुभयाे भने शरीरलाई फाइदा मात्र नभइ तपाइँकाे दिनकाे पनि राम्राे सुरूवात हुन्छ ।